China Ugwu Ugwu Ogologo China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ugwu Ugwu Ogologo - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Ugwu Ugwu Ogologo)
75W Ogige Ugwu Ogige n'èzí n'èzí N'elu ọwa
75W Ogige Ugwu Ogige n'èzí n'èzí N'elu ọwa Atụmatụ: 1. duru Post kacha elu ọkụ Ịchekwa ikike, gburugburu ebe obibi, Ọ dịghị UV ma ọ bụ IR radiation. 2. na- ebute ebe a na-ahụ maka ogwe ọkụ ihu -egwu, mgbochi mmiri, enweghị nchapụ, ọ dịghị ọkụ, na-echebe anya gị. 3.N'iko siri ike ma kwụsie ike, ọ dịghị...
50W Udo Okpu Ugwu Okpuchi
Umu Igwe Umu Ugwu Ugwu anyi achoghi mkpa igwe eletriki maka ikpochapu, na-eme ka ulo oru uzo di elu nke ahia ngbanwe zuru oke maka ọkụ n'èzí. Ebe anyị na-anọ n'èzí na-enwu ọkụ biara na mgbakwunye mgbidi nke 2.44 nke ga-adaba na ihe ọ bụla dị 3-anụ ọhịa n'èzí mbadamba oriọna oriọna. Naanị setịpụrụ ihe...
50W Bipute Ugwu Igwe Uzo Kwadoro Ikwunigwe
Ewube Ugwu Elu Ugwu anyị dị na 20000mAh Lithium battery, Led Solar Poles Lights nwere ike ịrụ ọrụ ruo awa 10-12 n'abalị ma ọ bụrụ na batrị zuru ezu n'ụbọchị. Nhazi ọhụrụ na mgbalite elekere nwere ìhè na-egbuke egbuke na ogologo oge ọrụ. Ngwá ọkụ na-acha ọkụ na-acha ọkụ nke anyanwụ Na-enye ìhè na oghere ndị...
55W Egwuregwu Kwesịrị Ekwesị N'ugwurugwu Egwurugwu
Mgbidi Nkume a na-enye ìhè 55W na-enye ụcha agba ọcha nke 5000k na 7150 lumens nke mmepụta, na-anọchi ntanye 200W HPS / MH. Nke a 55W Ejiri Wall Light dị mma maka nbata azụmahịa, nchebe nchebe na ngwa ngwa ọkụ ọkụ, na mgbakwunye. Mgbidi anyị Led Wall Mount Ngwá ọkụ nwere ike ịbanye na ntanetị foto na-eme ka ọ bụrụ na...
Ugwu Ugwu Ogologo Umu Oru Ogologo Ogige Ugwu Ogige Ugwu Ugwu Ugwu Ochie Debe Ugwu Ugwu Udo Ogologo Oge Ugwu Ugwu Uhie Yard Ulo Ogwu Ugbo